ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drive အတွက်အဆိုးဆုံး Linux မှ
ရဲစွမ်းသတ္တိ | | အခြား
ဒီအကျပ်အတည်းကာလမှာမင်းမှာရှိတာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်၊ Windows နဲ့ငါ့ကိုပြောခွင့်ပြုပါ။
ဒါကြောင့်ငါတို့ hard drive ကိုနေရာနည်းနည်းလောက်သာလိုချင်ရင်အရာတော်တော်များများကိုလုပ်ရမယ်၊ စီဒီတွေပေါ်မှာရုပ်ရှင်တွေကူးခိုင်းတယ်၊ ဂီတလည်းလုပ်တယ်၊ အရည်အသွေးအရည်အသွေးကျတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drive အတွက်အဆိုးဆုံး
droid @ droid-MS-7529: ~ $ sudo apt-get install Girlfriend ကို
droid အတွက် [sudo] စကားဝှက်
droid @ droid-MS-7529 ~ ~ $ fuckkk!
xD xD ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကိစ္စရပ်များသည်ပိုမိုများပြားလာသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်မိန်းကလေးထုပ်ပိုးမှုသည်မှီခိုမှုများနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဟေ့၊ ကောင်းတယ် !!!
ပိုဆိုးတာကနောက်ပိုင်းမှာမပြည့်စုံတဲ့မှီခိုမှုအမှားများရလာရင် ... XD
ကွာရှင်းမှု, EMO mode ကို activated သောအတူ
XD XD XD … +10 ရယ်မောတယ် @သတ္တိ 10 + @elav XD
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် 3DS နှင့် internet router များထက်ပိုမိုနေခဲ့သည်။ › 3› hehehe ~ အရမ်းကောင်းတယ်။ မင်းသိတယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့ ၅၀% မှာသက်ဆိုင်တယ်၊ ငါ့ရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်ရမယ်။ ငါဒီမှာပြောထားတာနဲ့အညီအဆင်ပြေသွားပြီ။ မက္ကစီကို xD ၌တည်၏
မင်းဒီမှာဒီမှာဖတ်ပြီးကတည်းကခဏတာ…အရေးကြီးတာကအင်တာနက်ကိုဆက်သုံးဖို့ပါ၊ မာရီယို၏အိုင်ကွန် HAHAHA ကိုတွေ့ရခြင်းသည်မည်မျှရယ်စရာကောင်းသည်ကိုသင်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။
ငါလက်တော့ပ်ကို hahahaha ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် xD blog မှာမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါ Mario ကို OS xD လို့မြင်တာကရယ်စရာကောင်းတယ်
ငါအမြဲတမ်းဒီမှာရှိနေတယ် ... ဒါပေမယ့်ငါဘာမှတ်ချက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကုန်သွားတယ်။ ငါမကြာခဏပြောဆိုရန်ကတိပေး; w;
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အကြား၊ KZKG ^ Gaara သည်နှစ်လအကြာတွင်သူ၏ချစ်သူရည်းစား 3801856031 ကိုချန်ထားခဲ့သည်။
အိုကေ ... ညံ့ဖျင်းသော Don Gaara xD ok, ok ... ငါဒီနေရာမှာကြာနေပြီ။ ငါမလုပ်နိုင်တာတစ်ခုခုလုပ်မယ်၊ ps no မဟုတ်ဘူးဒါကကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းဘူး B
သင်နားထောင်မယ့်လျှင်ဟားဟား ရဲစွမ်းသတ္တိ သူပြောသမျှအရာအားလုံးထဲမှာမင်းဟာဟားဟားဟားဟားဟားဟား !!!!
ငါကမပုပ်နိုင်တဲ့အမှားတွေအတွက်သူ့ကိုယူတယ်။ ငါရည်းစားရှိတယ်။ သူဘာပဲပြောလုပ်ငါကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ် &> / dev / တရားမဝင်သော … ဟားဟား!!!
ခင်ဗျားကနှစ်လအတွင်းမှာမင်းကိုပြောတယ်၊ မင်းကကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့မင်းကတစ်ကိုယ်ရေဖြစ်နေပြီလို့အမြဲပြောတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိရည်းစားနှင့်အတူ ၃ လကျော်နေခဲ့ပြီးယခင်နှစ်နှင့် ၂ နှစ်နီးပါးကြာခဲ့သည်။ Xp
"girlfriend" လို့သူပြောတာက gadget ဒါမှမဟုတ်မင်းမှာရှိတာကောင်းတာတစ်ခုခုပြောတာဆိုတော့ xD ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး
ငါဒီဟာဟားဟားဟား၊ ဒီကလေးဟာနံပါတ် ၁ လုံးဟပ်နေတယ် !!! !!!
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားတစ်ချိန်တည်း slashdot မှတွေ့ခဲ့ရသည့် Linux command ဟာသကိုသတိရစေသည်။ ဒီဟာကဒီလောက်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ (ကြာကြာကြာတယ်)
နေရာချထား စကားပြော ရက်စွဲ၊ စီဒီ၊ ချည်ခြင်း၊ ကြည့်ပါ၊ ထိ လက်ချောင်း unzip; အချိန်ပို ဦး ခေါင်း၊ ကွန်ဒုံးကို install လုပ်ရန် apt-get၊ တောင်ပေါ်၊ fsck; နောက်ထပ်; နောက်ထပ်; ထိုသို့ဖြစ်သည်; ထိုသို့ဖြစ်သည်; ထိုသို့ဖြစ်သည်; ထုတ်ပစ် ပမာဏ; တတ်လွယ်ခြင်းကွန်ဒုံးကိုဖယ်ရှား; တတ်လွယ်ခြင်း၊ အိပ်ပါ
hahahahaha ကွန်ဒုံးကို hahahaha ။
Conky ကို KDE တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ အဆင့် ၄ ဆင့်